YAKHELWE KWINDAWO YOKUTYA KWASEKUSENI IINGCAMANGO - AMAGUMBI OKUTYELA
Eyona Amagumbi Okutyela Yakhelwe kwindawo yokutya kwasekuseni Iingcamango
Yakhelwe kwindawo yokutya kwasekuseni Iingcamango
Nantsi igalari yethu eyakhelweyo kwizimvo zangoko zesidlo sakusasa ngeendlela ezahlukeneyo zoyilo.
Iibhulakufesi zesidlo sakusasa yindawo encinci yokutya, eqhelekileyo, ihlala ikhitshini okanye kufutshane nendawo yekhitshi. Xa kuthelekiswa nendawo yokutyela, ii-nooks zesidlo sakusasa zinika indawo yokutyela engaqhelekanga, ukuyenza indawo entle yesidlo sakusasa, ukutya okulula kunye nakuphi na ukutya okukhawulezayo. I-nook yesidlo sakusasa ihlala iqulathe ibhentshi (inokuba yindawo yokuzimela okanye eyakhelwe ngaphakathi), itafile yokutyela, kwaye ukuba indawo ivumela, izitulo zokutyela okanye izitulo ngokunjalo.
I-nooks eyakhelwe-ngaphakathi kwisidlo sakusasa ixhaphakile kumakhaya wesitayile esiqhelekileyo, ngakumbi abo baneewindows. Ngenxa yokuba iifestile zebay zihlala zinobungakanani obahlukileyo kunye nokumila, ii-nooks zesidlo sakusasa ezifakwe yi-bay windows zihlala zinezitulo ezakhelweyo / izihlalo ezihamba ngokuma kwefestile / udonga. Indawo efakwe kwindawo enesonka sakusasa ibonelela ngasese kunye nendawo ethambileyo ukonwabela ixesha lakho. Kodwa iifestile zebay azisoloko ziyimfuneko kwiindawo ezinesidlo sakusasa- ezinye zibekwa nje ngefestile kwikona yegumbi, okanye nakweyiphi na ikona okanye indawo kufutshane nekhitshi evumela indawo yokutya okanye yokuncokola.
Yakhelwe kubungakanani besidlo sakusasa seNook
Yakhelwe kwisidlo sakusasa ngeBench
Yakhelwe kwikona yesidlo sakusasa seKona
Ikhitshi eyakhelwe kwindawo yesidlo sakusasa yeNook
I-DIY eyakhelwe kwisidlo sakusasa i-Nook
Isidlo sakusasa esineNdawo yokuhlala
Encinci eyakhelwe kwisidlo sakusasa iNook
Ubungakanani beentsasa zakusasa zixhomekeke kwisithuba osifumanayo, rhoqo kuxhomekeke kubungakanani bendawo yeewindows. Iibhentshi ezakhelweyo ziya kuhlala zijikeleze i-17.5 ukuya kwi-20 ye-intshi ubunzulu ukuze zikhululeke, kwaye ubukhulu beetafile zokutyela ziya kwahluka ngokobungakanani kunye nokumila kweewindows. Ukuthintela iingozi kunye nokuqinisekisa ukuba kulula ukungena / ukuphuma kwindawo yebhentshi, kuyacetyiswa ukuba kusetyenziswe isangqa, i-oval, i-oblong okanye nayiphi na itafile yokutya enemiphetho ejikeleziweyo.
Iimpawu zaseYurophu zakudala zininzi kule ndawo ikhitshi emhlophe nengwevu. Ukuya ecaleni ekhitshini yindawo ebanzi yewindows kunye nebhentshi eyakhelweyo kunye netafile yomgangatho oqinileyo weWalnut eyongeza okwahlukileyo kwimibala ekhanyayo. Indawo enkulu ibonelela ngendawo yokuhlala izidlo ezi-5 nangaphezulu.
Apha sakha kwisidlo sakusasa izimvo ungathatha inkuthazo kwi:
Oku kucinyiwe Uyilo lwewindows bay bay icekeceke kancinci, yiyo loo nto ibhentshi eyakhelweyo isetyenzisiwe incinci, ingabinakho ukungena lula, kwaye idityaniswe netafile encinci yentsika yomthi ukongeza umahluko kumxholo omhlophe wendawo.
Ii-nooks zokutya akusoloko kufuneka ukuba zibe kwiwindow ye-bay - lo mzekelo ubonakalisa i-nook yokutyela enebhentshi eyakhiwe ngo-L kunye netafile yokutyela eluxande ukuze ifane. Ngokufana ne-bay yesiqhelo yeefestile zentsasa, oku kubekwa ekunene ziifestile ezinkulu, kuyinika umoya ofudumeleyo kunye nopholileyo.
ukuba sisicakakazi sembeko
Izithuba zangoku zinokuba nayo i-nook yesidlo sakusasa eyakhelweyo. Kulo mzekelo, ibhentshi enkulu eyakhelwe-ngaphakathi ebunjiweyo ebekwe kwikona yegumbi yayisetyenziswa, kwaye idityaniswe netafile yokutyela yeenkuni zangoku kunye nezitulo zokutya zangoku, ukuyinika i-vibe entsha kunye nolutsha. Ibhentshi eyakhelweyo apha ayinazo izihlalo zokuhlala, nangona kunjalo, emazantsi ebhentshi aphindwe kabini njengendawo yokugcina idrowa.
Ngomhla we-rustic vibe, le kona encinci yekhitshi yaguqulwa yenziwa i-nook yesidlo sakusasa. Ngenxa yokuba isithuba sincinci, ibhentshi eyakhelwe-ngaphakathi imxinwa ukuvumela indawo yetafile yokhuni oluqinileyo oluxande. Indawo yombala enemibala yongeza into eyonwabisayo kwisithuba, isinike umrhumo wasekhaya oqhelekileyo. Indawo yokugcina kufutshane ne-nook nayo yaguqulwa yenziwa indawo yokugcina incwadi, isenza indawo efanelekileyo yokufunda iincwadi, ukusebenza okanye ukufunda.
Ukuqhubeka nomgaqo wekhitshi, ibhentshi eyakhelweyo kule nook yesidlo sakusasa idibanisa nekhitshi lonke. Inendawo yokugcina iidrowa ngaphantsi, kunye nezihlalo ezihlala kamnandi ngaphezulu. Yayibhangqiwe ngetafile emhlophe yokutyela ye-poly carbonate kunye nezitulo zokutyela ezenziwe ngomthi, umxube wezitayile ezenza ukuba uzive ubuyela umva ngakumbi.
Ngoyilo lwangoku lwefama oku isihlalo sefestile esakhelweyo netafile yokutyela iyenza ifudumale kweli gumbi lelanga lembombo.
Sebenzisa isiphelo sendlela yokuphela yale khitshi igali, kufakelwe i-nook yekhitshi eyakhelweyo ukwandisa indawo. Itafile yokutyela ibekwe eludongeni lwefestile, ngelixa iibhentshi ezimbini ezakhelweyo ezinesitulo esifakwe ngesikhumba kunye nezihlalo ezingasemva zafakwa. Iikhabhathi ezikhoyo ezigcinwe ngasemva kweebhentshi, zongeza indawo eyongeziweyo yokubonisa kunye nokugcina.
Ngamanye amaxesha, ngokulula sifuna ikona encinci ekhitshini apho sinokuphumla kwaye siphumle kancinci. Le nook yesidlo sakusasa yekona yeyona ndawo ifanelekileyo yokwenza imisebenzi emininzi. Yakhelwe kwikona eneefestile ezinkulu ngoko inexabiso elilungileyo lokukhanya kwelanga ukujonga okuhle iyadi. Ikwabekiwe ngobuchule ukuze ukwazi ukubona okwenzekayo ekhitshini, kwaye ubenako ukujongana nokutya okuphekayo ngelixa uziphumlele ekoneni.
Ukuba awunayo iifestile ngekhitshi yakho yasekhitshini, usenokuphinda wenze umoya opholileyo ngokongeza umzobo eludongeni kunye nokongeza imitya emnandi / enemibala eqaqambileyo ebhentshini. Yigqibe ngesibane esikhethekileyo ukuze ikunike ikona yomoya opholileyo.
Indibaniselwano yepeyinti emhlophe kunye nomgubo oluhlaza okwesibhakabhaka yongeza umoya ohlaziyayo kwivenkile encinci yesidlo sakusasa kwikona yekhitshi. Ibhentshi eyakhelweyo yayisetyenziselwa ukugcinwa kunye nokuvalwa kweflip ukongeza indawo yokugcina, kunye neseti efanayo yetafile yokuhamba kunye nezitulo zazibhangqiwe nebhentshi emhlophe.
Ngenxa yokuba ikhitshi linefestile evulekileyo, le nook yasekhitshini inandipha itafile yokutya yoxande egcweleyo ebhangqiwe nezitulo zokutyela ezi-4 ezifanayo. Eyakhelwe ebhentshini ikwanesihlalo esinyusiweyo kunye nomqamelo obuyiselwe umva ukuze ubonelele ngakumbi.
iikowuti zokufumana intombi
Umva wesiqithi sekhitshi esimile njengo-L sasetyenziselwa ukwenza i-nook eyakhelwe-ngaphakathi kwasekuseni, endaweni yekhawuntari yesiqhelo okanye izitulo zebar. Ukongezwa kwenook epholileyo kunceda ukulinganisela kunye nokunciphisa iinkuni ezimnyama zale khitshi yesitayile yakudala. Yakhelwe kwisidlo sakusasa izimvo ezisetyenziswayo izitulo zasekhitshini zesiqithi inokusebenza, gcina indawo kwaye zilungile kwincoko nakwabo baneentsapho.
Kule khitshi yanamhlanje, endaweni yokwakha ibhentshi eyakhiwe okanye ngokuchasene nesiqithi sasekhitshini, oku endaweni yoko yongeza itafile yokutya eyakhelwe-ngaphakathi ibekwe ngokungathi iziko lesiqithi sekhitshi. I-nook encinci yesidlo sakusasa inikwe izitulo ezine ze-tulip ukutshatisa inkangeleko yanamhlanje ekhitshini.
Into eyahlukileyo ngale nook yesidlo sakusasa kukuba ayibekwanga eludongeni, hayi kwikona okanye indawo yefestile kuba ikhitshi limi embindini weplani evulekileyo yokuhlala kunye nendawo yekhitshi. Ukugcina indawo, nangona kunjalo, ibhentshi eyakhelwe-ngaphakathi yayihlanganiswe kwisiqithi sasekhitshini, esiphinda kabini njengendawo yokubuyela umva yebhentshi. Ukudityaniswa kwetafile yokutyela ende kunye nomxinwa kunye nezitulo zokutyela, inika indawo yasekhitshini yanamhlanje ukufudumala ekhaya.
Ngenxa yokuba ifestile ibekwe kanye emva kwekhawuntara yekhitshi emise u-U, ukukhanya kwelanga kuyandiswa ngokufaka ibhentshi eyakhelwe-ngaphakathi eqhotyoshelwe kwikhawuntara, uyisebenzisa njenge-nook encinci yesidlo sakusasa. Ibhentshi libhangqiwe kunye netafile yokutyela eyenziwe ngomthi kunye nezitulo zokutyela ezingalinganiyo, zinika ukuziva okuqhelekileyo, oku-shabby-chic.
Ngezinto ezinomtsalane zefenitshala yesiFrentshi kunye nezinto ezithandwayo, eli khitshi ngokuqinisekileyo libalasele ngobuhle. Izitayile zangaphakathi zesiFrentshi zokuziva ngathi zisesikweni kwaye zoyikisa, kodwa ukongezwa kwesidlo sakusasa esincinci esimnandi esiqhotyoshelwe kwisiqithi sasekhitshini songeza indawo eqhelekileyo kuloo ndawo.
Ukutshatisa i-rustic vibe ekhitshini, le festile yasekuseni i-nook yongeza amakhethini ukucoca ukukhanya kwangaphandle kwaye uyinike ubumfihlo ngakumbi. Ubungakanani obahlukeneyo kunye neepateni zemiqamelo ziye zongezwa ukuyinika imeko yokuphumla. A ibhari yesidlo sakusasa yesiqithi sasekhitshini inika ithuba elingakumbi lokutya-xa kutyiwa.
Ibhentshi encinci eyakhelwe-ngaphakathi eyakhiwe ngo-L yasikwa kwisiqithi esikhulu sekhitshi ukwenza isidlo sakusasa esincinci endaweni yendawo yokutya. I-nook yesidlo sakusasa ayiboneleli kuphela ngendawo engaphezulu, kodwa ikhululekile ngakumbi kwaye inika ukuziva ubuyile.
Yintoni eyahlukileyo ngale nook yasekuseni ye-DIY kukuba ayinayo ifestile ekufuphi, ke yayifakwe kufutshane neglasi enkulu kuphela Umnyango waseFrance ukuzisa ukukhanya kwindawo. Ibhentshi nayo ayakhelwanga ngaphakathi, kodwa ibhentshi enemilo eyi-L ehambayo ene-backrest kunye nezihlalo ezisuswayo zezihlalo. Yayibhangqwe ngetafile yomthi oqinileyo kunye nebhentshi emhlophe epeyintiweyo yokongeza into ye-rustic kwindawo.
Umbono wangaphandle ubonelela ngokukhululeka kunye nokungaqheleki kule ndlela yakudala yesitayile sakusasa. Ibhentshi eyakhelweyo ngumxube we-back and back-less, kunye nesihlalo esishicilelweyo esihlala sibonelelwe ngentuthuzelo. Ibhentshi emhlophe ibhangqwe ngetafile yokutyela ye-oblong yokuvuna kunye nezitulo zamaplanga ezimhlophe zakudala kunye nesitulo esincinci somthi omhlophe ukugqibezela ukubonakala kwendawo.
Kule khitshi yanamhlanje, ikhitshi elincinci lesidlo sakusasa le-DIY lenziwe ngebhentshi ehambayo ehambelana nombala omhlophe ofanayo kunye neekhawuntara zasekhitshini, zidityaniswe netafile yanamhlanje emhlophe emhlophe kunye nezitulo zentsimbi ezixineneyo. Phonsa imithwalo njengesihlalo sokuhlala songezwe ukulinganisa uburhabaxa bodonga lwezitena kwaye ungeze umbala omncinci kwisithuba.
Ukutshatisa izitulo zakudala zeChippendale kunye nobugcisa beklasikhi obuxhonywe ezindongeni, ibhentshi eyakhelweyo iguqula isitayile esifanayo, kwaye ikwasebenzisa izinto zokwenziwa kwesikhumba ezihambelana nezitulo zengalo. Kuba iindonga zimhlophe mhlophe, inkangeleko yonke isalungelelanisiwe kwaye iyahambelana. Izimvo zangaphakathi zesidlo sakusasa ezakhelwe-ngaphakathi ezihlalweni zebhentshi zihlala zinezitulo ezinento yokwenza nezinto zokwakha ezihambelana noko.
Kuba ikhitshi lincinci, uyilo oluhambelanayo lwalusetyenziselwa le nook yesidlo sakusasa. Isithuba sandiswa ngokusetyenziswa kwebhentshi njengedrowa / indawo yokugcina, kwaye izitulo zokutya ezongeziweyo zinoyilo olucekeceke nolukhanyayo. Ngokwahlukileyo, itafile yokutyela esetyenzisiweyo imnyama, kwaye ibhodi enebhodi nayo yongezwa emva kwebhentshi.
Ukusetyenziswa kwe iiphaneli zebadibhodi Kwibhentshi eyakhelwe-ngaphakathi kwibhokisi yesidlo sakusasa yongeza umahluko omnandi kunye nokuthungwa okongeziweyo kwikhitshi yesitayile sangoku. Umahluko omkhulu kumbala / ukugqiba ngokungafaniyo ukwahlula ekhitshini, ngelixa ukugqibezela kweenkuni kwitafile yokutya kunceda ukuzizisa kunye.
Ezinye ii-nook kunye neefestile zebay zinemilo engaqhelekanga, ke iibhentshi ezakhelweyo ziyafika ziluncedo lokwandisa indawo yokuhlala kwezi ndawo. Le nook yesidlo sakusasa ikwi-semi-yabucala indawo ene-archway eyahlulahlula ukuba yenze ikhitshi, iyinike indawo yabucala kunye necozy.
Incinci eyakhiwe kwisidlo sakusasa izimvo zihlala zibonisa ibhentshi yekona kunye netafile yokutyela ephathekayo kunye nezitulo ezifanayo. Ngolu hlobo lokuseta itafile kunye nezitulo zinokubekwa zodwa ukulungiselela izixa ezahlukeneyo zeendwendwe.
Lo ngumzekelo obalaseleyo wenokhi encinci eyakhiweyo ekhitshini. Eli linomgangatho omncinci owakhelwe-ngaphakathi webhentshi ophindwe kabini njengendawo yokugcina eyongezelelweyo, edityaniswe netafile encinci yokutya yokutya kunye nezitulo zokutyela ezibini. Imisonto yeti kunye neblue yongezwa ukongeza umbala kunye nokubonelela ngenkxaso kubasebenzisi.
Awusoloko ufuna indawo enkulu yesidlo sakusasa. Le nook yesidlo sakusasa ibekwe kwikona encinci, eqinileyo yegumbi. Inebhentshi encinci emile njengo-L enomqolo owenziwe ngomthi. Ukugcina indawo, kwasetyenziswa itafile yentsika yemabhile yanamhlanje, kwaye izitulo zokutyela ezongeziweyo ezisetyenzisiweyo zazicacile ze-acrylic ukuze indawo ingabonakali igcwele kakhulu.
Kuba le nook yesidlo sakusasa imi kufutshane nomnyango, akukho zitihlalo zongeziweyo zokutya zongezwa ukuthintela iingozi. Ibhentshi eyakhelwe-ngaphakathi yenziwa ngokurhwaxwa kweenkuni okulula okuhambelana nomhlaba wonke wendawo, kwaye ifaniswe netafile yokuhamba ngomthi kunye nomphezulu omnyama womnatha wokongeza umahluko. Incinci eyakhelwe kwimibono yesidlo sakusasa eneebhentshi kunye neetafile eziphathwayo zinokuxhamla kuguquko lokusetyenziswa kufutshane neminyango okanye kwiindawo ezincinci.
Nangona ibekwe kwindawo esezantsi komhlaba, le nook encinci yesidlo sakusasa isafumana ukukhanya okuninzi kwendalo kuba iiglasi ezikroliweyo kunye neefestile ezinkulu zivumela ukukhanya ukuba kufikelele kuloo ndawo. Ngenxa yokuphakama kwesilingi, ibhentshi ngokwalo ligcinwa lilula kwaye liphantsi kugcino lwedrowa, kunye nesihlalo esisuswayo kunye neetafile zangasemva. Izitulo zesileji ezimhlophe zentsimbi nazo zongezwa ukutshatisa itafile emhlophe yokutyela, kunye nesibane esahlukileyo esahlukileyo songezwa ukogcina umoya upholile.
Le nook yesidlo sakusasa yakhiwa kwisithuba esiphakathi kwekholamu kunye nekhabhathi yebar, ivumela ukusetyenziswa kwendawo engasetyenziswanga. Izitulo ezikhawulezayo zokubuyela umva zongeza i-vibe-back-vibe kwisithuba esincinci, kwaye yongeza into ebhaliweyo ehambelana nombono wendawo yonke. Ibha encinci yasekhaya imi ecaleni kwe usingasiqithi wasekhitshini ukubonelela ngendawo enesitayile yokugcina iwayini kunye nokufikelela ngokulula kwiindwendwe ezonwabisayo.
unxibe iindwendwe zomtshato waselwandle
izipho zokukhumbula isikhumba kuye
amakhonkco wesithembiso esenzelwe yena
incam yokulahla amabala
amakhonkco omtshato oyindoda aneedayimane